Rusta & Matcha Somaliska - Ability
Waxaan kaa caawineynaa inaad hesho shaqo ama waxbarasho!
Mararka qaarkood way adkaan kartaa in la helo shaqo oo aad ogaato sida loo sii wado. Sidaa darteed, waxaanu ku siinaynaa taageero shaqo raadis ahaan iyo caawinta safarkaaga shaqo cusub.
Rusta och Matcha waa adeeg loogu talagalay adiga oo ka diiwaangashan Xafiiska Shaqada oo ka qaybqaadan kara barnaamijka Rusta iyo Matcha. La xidhiidh xafiiska shaqada oo dooro (Ability) si aad u bilowdo waan ku caawin doonaa.
1. La xidhiidh xafiiska shaqada
2. Na dooro (Ability ) lambarka KA
3. Hadda waxaan kaa caawin karnaa inaad hesho shaqo ama waxbarasho!
Annaga, waxaa muhiim ah inaad dareento ammaan iyo raaxo. Markaa waa inaad la shaqeysaa tababare waqti ku qaata inuu ku barto oo uu shaqada ku waafajiyo baahiyahaaga iyo xaaladahaaga shaqsiyeed. Si wada jir ah oo aad ula socotaan tababarahaaga sida fiican u tababaran ee khibrada leh, waxa aad ka shaqayn doontaan yoolka ah in aad sida ugu dhakhsaha badan ugu bixi doontaan shaqada ama waxbarashada, si kastaba ha ahaatee waanu ka qayb qaadan doonaa yoolka.
Faahfaahin dheeraad ah ka akhri bogga internetka ee Xafiiska Shaqada
Ma rabtaa caawimo?
La xidhiidh xafiiska (Ability ) deegaankaaga waxaanu kaa caawin doonaa inaad doorato (xafiiska shaqada)
Eeg xafiiska deegaanka ee Ability
Si aad u guulaysato, waxaanu samaynaa waxyaabaha soo socda:
Waxaan u isticmaalnaa xiriirada qiimaha leh ee nolosha shaqada si aan kuu caawinno.
Waxaan kaa caawineynaa inaad qorto CV aad u wanaagsan.
Si aad shaqo u hesho, waxaad haysataa fursad aad kula kulanto kuwa kale oo khibrad leh oo leh shabakado.
Waxaan kaa caawineynaa fursad aad ku tijaabiso shaqo oo aad tijaabiso shaqadaada riyada oo aad la sameyso xiriiryo.
Khariidad oo muuji kartidaada mid muuqata. Waxaad samayn kartaa wax ka badan inta aad u malaynayso, taas oo muhiim ah in la awoodo in ay muujiyaan.
Waxaan qabanqaabinnaa booqashooyin waxbarasho oo adiga kugu habboon.
Toddobaad kasta oo kale waxaad la kulantaa tababarahaaga.
Haddii aad xiisaynayso inaad naftaada wax barato, waxaanu kaa caawin doonaa inaad hesho waxbarashada saxda ah ee kugu habboon.
Waraysiyadu waa muhiim, markaad nala tababarto waxaad fursad u helaysaa inaad noqoto qof wanaagsan.